Weeraryahankii hore ee Chelsea Oscar oo xaqiijiyay in Barcelona lasoo Xiriirtay | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Weeraryahankii hore ee Chelsea Oscar oo xaqiijiyay in Barcelona lasoo Xiriirtay
Weeraryahanka kooxda Shanghai Port Oscar ayaa shaaca ka qaaday in Barcelona ay la soo xiriirtay saxiixiisa.
30 jirkaan ayaa China uga soo dhaqaaqay Chelsea 2017, wuxuuna u saftay 170 kulan kooxdiisa haatan tartamada oo dhan, isagoo ka qeyb qaatay 50 gool, waxaana loo diiwaan geliyay 93 caawin.
Oscar ayaa la rumeysan yahay inuu yahay ciyaaryahanka shanaad ee ugu mushaarka badan kubada cagta adduunka laakiin waxaa la sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhimo mushaarka si uu waqti gaaban ugu biiro Barcelona.
Kubadsameeyaha ayaa xaqiijiyay in kooxda Xavi ay la xiriirtay wakiilkiisa, balse ma jiraan wax wada hadal ah oo rasmi ah, iyadoo kooxda reer Catalan ay u baahan tahay inay ciyaartoy badan soo iibiso ka hor inta aysan wax kordhin ah sameynin.
“Haa, tani waxay ku timid aqoontayda,” Oscar ayaa u sheegay TNT Sports . “Barcelona waxay la xiriirtay wakiilkeyga si uu u ogaado suurtogalnimadan, waxay ogaayeen in kubadda cagta Shiinaha ay joogsan doonto illaa Maarso, sidaas darteed Barca waxay wajaheysaa waqti adag hadda.
Oscar ayaa la filayaa inuu bishan ku biiro koox ka dhisan Yurub isagoo rajo ka qaba inuu weli boos ka helo xulka Brazil ee ka qayb galaya Koobka Adduunka 2022.
Maamulaha Borussia Dortmund oo ka hadlay mustaqbalka Erling Braut Haaland iyadoo...
Joan Laporta oo beeniyay in ay Barcelona wadahadalo kula jirto...
Manchester United ‘waxay diirada saartay suuqa kala iibsiga xagaaga.’
Jadwalka doorasho ee kuraasta qaar ka mid ah beelaha Muqdisho oo...